Way qurux badnayd, kaftan badnayd sidoo kalena waxay ahayd tuugo’
Shirwayn oo hargeysa ku dhexmeray Dawlada Ethiopia iyo dawlada Somaliland
Madaxwayne Muuse Biixi oo amaaney wadamo reer yurub ah oo horumarinta somaliland ka shaqeeyay
Masuul Sare oo ka badbaaday Qarax Dameer lagu soo xidhay oo lala maaganaa in lagu Khaarajiyo
Wargays Caan Ah Oo Somaliland Uga Digay Halista Ganacsato U Adeegaysa Farmaajo Oo Ku Hawlan Abaabul Shacab Iyo Danaha ku Lamaan!
gudida ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakilada oo sheegtay in mad madaw faro badan ku jiro xisa
Wadani Oo Ka Hadlay Waxyeelada Shirkada Trafigura
Badhasaab mamnuucay Shirarka Xisbiyadu qabsadaan iyo sababta,
Wiil Somalia oo Diyaarad sameeyay oo la kulmay Aabbaha Diyaaradaha Darooniska Turkiga
Ninka bilyaneerka ah ee lacagtiisa oo dhan bixiyay
Thomas iyo Tonia waxa ay ku kulmeen baraha bulshada waxaanay bilaabeen inay farriimo isugu dirdiraan si joogto ah, iyagoo wadaagayey xiisaha ay u qabaan labadooduba safarka iyo eydooda dab joogta ah.
34 jirkan lagu magacaabo Thomas, oo u dhashay West Midlands, si xad dhaaf ah ayuu u jeclaaday isla mar ahaantaana u damcay inuu ula qorsheeyo noloshiisa mustaqbalka, laakiin Tonia waxay dhab ahaantii ahayd khaayimad.
“Tonia iyo anigu waxyaalo badan ayaannu ka midaysnayn, waxaannuna wada hadli jirney maalin kasta muddo toddoba bilood ah ah. Waxay ahayd gabadh qurux badan, kaftan badan sidoo kalena naxariis badan” ayuu yidhi Thomas.
“Markaan imika dib u milicsado, ma rumaysto sida ay ii khaladday ee iigu danaysatay. Xataa wax fikrad ah kama haysan inay doonayso inay i khiyaamayso, si xogtayda gaarka ah debedda ugu saarto si ay lacag iiga hesho
Waxa uu ahaa dhibbanaha sheeko isaga lagu khalday. Waxay ugu cabatay in labadeedii waalid ka dhinteen, sidoo kalena ay la nooshahay ayeydeed oo xanuunka Kansarka qabta dalka US.
Waxay sida oo kale u sheegtay, inay rabto inay bixiso cuntada iyo dawo qaaali ah lacagtooda, sidaa darteedna waxa ay weydiisatay lacag. Markale waxay tustay caddaymo sheegaya, inay la filayo inay iyana xanuunkaas si hidde ah u qaaddo. Kuwaas oo been ahaa.
Si ay sheekada uga dhigto mid macquul ah, lacagta waxaa lagu xawilay akoonkiisa. Tonia, waxaanay weydiisatay inay la yeelato kiisa, iyadoo u sheegtay inaanay haysan mid iyada u gaar ah.
Xaqiiqdii, lacagtu waxay ahayd mid deyn ahaan lagu qaatay oo magaciisa lagu soo qaaday, oo uu soo qaaday qofkii khaldayey. Wuxuu ogaaday markii u ku warhelay, waraaqo ka soo dhacay shirkadihii deynta magaciisa lagaga qaatay ee akoonkiisa lagu shubtay. Markaas ayuunka xaqiiqsaday in la khiyaamay.
Kiisaskani waa wax dhaca, siiba kuwa ku dhisan jacaylku, inkasta oo dhibbanuhu yahay wiil yar haddana waa calaamadihii uu lahaa kiisaska la isku khaldaa.
Qaar badan oo isticmaala adeegyada lagu haasaawo ama baraha bulshada, marka qofku isticmaalo sawir aan kiisa ahay, waxay markiiba u aqoonsadaan qof u diyaara inuu cid khaldo.
Cilmi baadhis ay samaysay UK Finance waxay soo jeedisay in 27% dadka isticmaala baraha la isku shukaansado, ay soo arkeen qof isku dayey inuu khaldo.
Dhibbanayaasha qaar ayaa la weydiistay lacag gaadha £321, celceliskii, halka qaar bandanna lagu khalday lacag intaa ka badan.
Xogtii u danbaysay ee UK Finance ay soo bandhigto waxay muujisay in £7.9m, lagu waayey xidhiidho aan jirin, qaybtii hore ee sannadkii 2019, taas oo korodhay 50% isla xilligaas sannadkii tegey.
Danbiilayaasha ku kaca ku takrifalka xidhiidhada jacaylku, waxay u maraan inay bogaggooda ku soo ururiyaan sawirro muujunaya hantida ay leeyihiin iyo noloshooda gaarka, si ay ugu khaldaan dhibbanayaasha.
Booliisku way baadhi karaan waxaanay ku siin karaan caawin, badanaa se lacagta dib looma helo
Waa wax fudud in dadka wax khaldayaa ay isticmaalaan goobo aa ahayn halka ay joogaan iyo lanbarro aan diwaan gashanayn.
Weligaa lacag ha u dirin qof aydaan kulmin asee aad isku barateen online-ka.
Ugu yaraan laba jeer ka fikir xogtaada khaaska ah ee aad ku baahinayso baraha bulshadu in loo isticmaali karo in lagugu khaldo ama laaluush lagaaga qaado.
Daawo, Barmamijka Dekada Berbera e Dhoofka xoolaha iyo tadawarka ay samaeysay sanadkii u danbeeyay
BERBERA, Ururka towfiiq e Gaadiidka waaweyn o dib udoortay maamulkoodii hore